Pyi Taw Thit Real Estate And Law Firm Myanmar Real Estate | ShweProperty.com
PYI TAW THIT REAL ESTATE AND LAW FIRM
095051785, 095403148, 0973236717, 0931579968,01401294,01450944, 01556352, 09250139211
No.127, U CHIT MAUNG ROAD,BAHAN Township.
Valuation Real estate legal consulting
Hotels Monthly and Yearly Contract
South Okkalapa Sanchaung
Dagon Myothit(South) Dagon Myothit(North)
About PYI TAW THIT REAL ESTATE AND LAW FIRM
အိမ်၊ခြံ၊မြေနှင့်ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်(သို့မဟုတ်)ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသောအနာဂါတ် လူနေထိုင်မှုအဆင့်မြင့်မားရန် တိုက်တာ၊ကွန်ဒိုမီဒီယမ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် စက်ရုံ၊ဂိုဒေါင်၊မြေနေရာများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်မြို့ပြအိမ်ယာ
PYI TAW THIT REAL ESTATE AND LAW FIRM ၏ Latest Property Listing
CondoYankin ၊ Yangonအသင့်နေ,Master…...Advertised by GREAT…
6 Lakhs()Area : 900 sqft32
Advertiser : GREAT PYI TAW THIT CO.,LTD.
ရန်ကင်းမြို့နယ် ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာ တွင်နေထိုင်ရန် ကောင်းမွန်သော အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုခန်းကျယ် ငှားရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - ‎01 450944,‎09 73236717
095051785, 095403148, 0973236717, 0931579968
Condo For Sale in Yankin
2,100 Lakhs(Negotiable)Area : 1700 sqft32
ရန်ကင်းမြို့နယ် ရွှေမိုးကောင်း Condo ရှိနေထိုင်ရန် သင့်တော်သော အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - ‎01 450944,‎09 73236717
Asking Price : 2,100 Lakhs
CondoThingangkuun ၊ Yangonအသင့်နေ,Master…...Advertised by GREAT…
2,300 Lakhs(Negotiable)Area : 1850 sqft42
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သုမောင် Luxury Condo ရှိနေထိုင်ရန် သင့်တင့် ကောင်းမွန်သော အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - ‎01 450944,‎09 73236717
CondoMingalartaungnyunt ၊ Yangonအသင့်နေ,Master…...Advertised by GREAT…
3,000 Lakhs(Negotiable)Area : 1850 sqft32
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် Condo ရှိနေထိုင်ရန် သင့်တော်သော အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - ‎01 450944,‎09 73236717
Landed HouseMayangone ၊ Yangonအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead…...Advertised by GREAT…
6,000 USD(Negotiable)Area : 10400 sqft45
Area : 10400 sqft
မရန်းကုန်းမြို့နယ် မင်းဓမ္မလမ်းတွင် ရုံးခန်းဖွင့်ရန် သင့်တော်သော 2Rcလုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။(01-401294,01-556352,09-31579968,09-250139211,09-456968111)
Asking Price : 6,000 USD
CondoKamaryut ၊ Yangonအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead…...Advertised by GREAT…
1,800 Lakhs(Negotiable)Area : 1300 sqft22
ကမာရွတ်မြို့နယ် ခိုင်ရွှေခိုင်ကွန်ဒိုတွင် အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။(01-401294,01-556352,09-31579968,09-250139211,09-456968111)
Apartment For Sale in Latha
ApartmentLatha ၊ Yangonအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by GREAT…
1,010 Lakhs(Negotiable)Area : 1000 sqft11
Latha | Yangon
လသာမြို့နယ် ၂၃လမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
Asking Price : 1,010 Lakhs
ApartmentBahan ၊ Yangonအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by GREAT…
1,000 Lakhs(Negotiable)Area : 1200 sqft21
ဗဟန်းမြို့နယ် ရေတာရှည်လမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အသင့်နေတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
ApartmentSanchaung ၊ Yangonအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Overhead…...Advertised by GREAT…
800 Lakhs(Negotiable)Area : 975 sqft21
Area : 975 sqft
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်းမပေါ်ရှိ အသင့်နေ အဆင့်မြင့် တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
Condo For Sale in Ahlon
CondoAhlon ၊ Yangonအသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by GREAT…
4,700 Lakhs(Negotiable)Area : 2504 sqft43
Area : 2504 sqft
အလုံမြို့နယ်ရှိ အသင့်နေ အဆင့်မြင့် Golden Rose Condo ရောင်းရန်ရှိသည်
Asking Price : 4,700 Lakhs
Mini Condo For Sale in Insein
Mini CondoInsein ၊ Yangonအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by GREAT…
1,500 Lakhs()Area : 1800 sqft32
Insein | Yangon
ဈေးနှုန်းလည်းတန်၊ အခန်းလည်းကျယ် အင်းစိန် ကြို.ကုန်းအနီး လမ်းသန်. တိုက်သစ်
Apartment For Rent in Kyauktada
ApartmentKyauktada ၊ Yangonအသင့်နေ,လုပ်ငန်းရ,ပါကေးခင်း,ထပ်ခိုး,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...Advertised by GREAT…
12 Lakhs(Negotiable)Area : 1500 sqft21
Asking Price : 12 Lakhs
Mini Condo For Rent in Kyauktada
Mini CondoKyauktada ၊ Yangonပါကေးခင်း,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...Advertised by GREAT…
10 Lakhs(Negotiable)Area : 1250 sqft21
Landed HouseMayangone ၊ Yangonအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by GREAT…
6,000 USD()Area : 10400 sqft00
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မင်းဓမ္မလမ်းတွင် တစ်ထပ်အိမ်လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် (01-401294,01556352,0931579968)
Landed House For Rent in Kamaryut
Landed HouseKamaryut ၊ Yangonအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by GREAT…
1,000 USD()Area : 1250 sqft00
ကမာရွတ်ရှိ သံလွင်လမ်းသွယ်တွင် နှစ်ထပ်အိမ်လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် (01-401294,01556352,0931579968)
Asking Price : 1,000 USD
Landed HouseThingangkuun ၊ Yangonအသင့်နေ,Overhead…...Advertised by GREAT…
80 Lakhs(Negotiable)Area : 8100 sqft00
Area : 8100 sqft
သင်္ဃန်းကျွန်းရှိ ဝေဇယန္တာလမ်းတွင် နှစ်ထပ်အိမ်လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် (01-401294,01556352,0931579968)
LandMayangone ၊ Yangon...Advertised by GREAT…
0 Lakhs(Negotiable)Area : 10000 sqft00
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ပြည်လမ်းတွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် (01-401294,01556352,0931579968)
Asking Price :0Lakhs
0 Lakhs()Area : 10000 sqft00
Landed House For Sale in Thingangkuun
5,000 Lakhs()Area : 5400 sqft00